Dahabka Somaliya laga dhoofiyay 2020 iyo 2021. | allsanaag
Dahabka Somaliya laga dhoofiyay 2020 iyo 2021.
Waa maxaay waxa ugu badan ee Somalidu Dibadda u dhoofiso?Jawaabtaadu waa Xoolaha nool ( Livestock Export) .
Aniguba sidaa ayaan ku jawaabi lahaa 20 Cisho ka hor, taana Labadeenuba waa ku khaldanaa leheyn. waxa ugu badan ee Labadii sano ee la soo dhaafay Dalka laga dhoofiyay waa Dahab.
Sanadkii 2020 iyo 2021, waxaa Dalka laga dhoofiyay Dahab Sicirkiisu u dhexeeyo $128 Million ilaa $132 Million. weey igu adkaatay markii hore in aan aamino, Qofku wixii uuna ogeyn ama uuna aqoon waxa u fudud in uu yiraa, Ma dhici karto ama waa Been.
Bacdamaa aan ahay Qof dhaqaalaha wax ka bartay, Arrintuna ay la xiriirto takhasuskeeyga ,waxaan go’aansaday in aan isku dayo in aan wax badan ka ogaado.Dadku waxa ay isku khaldaan Kalmadaha, ( Cost, price and Value) oo laga yaabo in Luqadda Somalida si isku dhaw loo wada isticmaalo, Lakin Macnahoodu aad u kala duwanyahay.
waxa aan bilaabay Cilmi baaris iyo Xog Ururin arrintaa la xiriirto, Laba habeen ayaan ku gaaray saacado dambe, waxa aan raadiyay Khubaro dhaqaale oo ay ku jiraan Macalimiinteeydii hore ee Jaamacadaha, waana la kulmay. kadibna waxaan tagay Xarumaha Wasaaradaha ay khuseeyso qaarkood, Doodda Cilmi baariseed waxaan ku gaarnay ilaa 5ta galabnimo qado la’aan, shaqaalihii oo dhanna waa ka rawaxeen shaqdii.
Deegaanada hadda aadka looga soo saaro Dahabka waxaa ka mid ah: Somali land, Gobalka Barri, Sanaag, Labadda Shabeele iyo Hiiraan. Xukuumadda iyo wasaaradda Maaliyadu dhoofinta Dahabka ee socoto shaqa kuma leh, ma fasixin mana fududeeyn.
Meelaha laga dhoofiyo qaar ma xakumaan. Mogadishu ayeey leeyihiin wax yaabaha laga dhoofiyo qaar ma ogaan karno, ama ma jooji karno. Dhab ahaan wasaaraddu lug kuma leh dhoofinta Dahabka, Laakin waa lagu eedeeyn karaa maxaad u ogaa weeyseen. Wadamo waxaa jiro aan lagu darin kuwa Dahabka soo saaro sida Switzerland, laakin Dahab badan dhoofiyo, kaa oo ah mid lagu keeydsaday, lagu kala iibsaday, kadibna dib loo dhoofiyo.
Dahabku waxa uu ka mid yahay, Macdanta ugu raqiisan, waxaa uu uga jiraa Kaalinta 21aad, Macdanta qaar 100.000 jeer ayeey ka qaalisanyihiin Dahabka. Khubarada Dhaqaalaha ee aan la kumay qaar ayaa aamisan in lagu dhax qarinayo Macdan kale oo Dhahabka ka qaalisn oo la dhoofiyay.
Macdanta qaarna wadamada laga helo haddaan si nidaamsan loo maamulin waxaa suura gal ah in ay Abuurto Colaad joogta ah oo Shirkaduhu ay Abuuraan, si ay xasilooni darida uga faa’iideeystaan.
Dhabka jajabka ah ee Haweeynka Ganacsada ahi u dhoofiyaan Dubai, si loogu soo habeeyo oo Mode-ka markaa socdo looga dhigo, kaa qiimahiisu sanadkii waa $ 1.5 Million kaliya, isaga laftiisa cashuurtiisa waa lala dhuuntaa.
Sicirka Dahabkaa Jajabka loo yaqaan, aad ayuu uga hooseeyaa inta Dahab la dhoofiyo, markaa isma laha labada Dahab ee la dhoofiyo. Dahabkii laga dhoofiyay Somaliya 2020 iyo 2021 Badankiisa waxaa loo dhoofiyaa Dubai, Ruushka iyo Shiinaha.
Hadda si xoowli ah ayeey uga socotaa Dalka Qodidda Dahabku, waxaana Dalka ku soo badanayo Xafiisyo si Lacag la’aan ah kuu baarayo Dhagax kasta oo aad ula timaad, kadibna kaala heshiinayo sicirka.
Qof ahaan Ma diidani in Dahab Dalka laga dhoofiyo, waxaan rabaa oo kaliya in si nidaamka waafaqsan loo dhoofiyo, Dowladu Cashuur ka qaadato Dahabkaa, Suuq Ganacsi loo raadiyo si aan loo dhicin Dadka dhoofiyo Dahabka, oo ay ku iibiyaan sicirkiisa Saxda ah.
Saaxiibadeey iyo Aniguba waxaan ku heshiinay in cilmi baaristaa la sii wado si loo ogaado haddii Dahabka la dhoofiyay 2020 iyo 2021 uu kaalinta 1aad uga jiro waxa ey dhoofisay Somalidu, uuna ka horeeyo Xoolaha nool. Adigana waxaan kaa codsaneeynaa in wixii Ogaalkaaga ah aad nagu biiriso .
← Shan sano ayaan ku jirnay Xaalad jaah wareer Wararkii ugu dambeeyey ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya →